जिनपिङले लञ्च गरे आफ्नो एप, यी हुन् विशेषताहरु
scheduleबिहिवार भाद्र ५ गते, २०७६
बेइजिङ, ११ फागुन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले एउटा यस्तो एप लञ्च गरेको छ जसमार्फत् चिनियाँ नागरिकले राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् र उनका प्रेरणादायी कुराहरु सुन्न सक्छन् ।
उक्त एपलाई लाखौं चिनियाँले डाउनलोड गरिसकेका छन् । उक्त एपमा कम्युनिष्ट नेताहरुको विचारहरु शेयर गर्नुका साथै क्विजका जवाफअनुसार निश्चित नम्बर पनि दिइरहिएको छ । चिनियाँहरुले उक्त एपमा लामो समय समय बिताउँदा यसको बदलामा केही उपहार पाउने विश्वास लिएका छन् ।
कतिपयले एप डाउनलोड गर्न दबाव महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए पनि धेरैले एपमार्फत् रोजगारी मिल्ने र करिअर बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सरकारका स्थानीय प्रतिनिधिले एप डाउनलोड गर्न जमेर प्रचार गरिरहेका छन् ।
एपको नाम शुक्शी कियांगुओ राखिएको छ जसको अर्थ हुन्छ चीनलाई बलियो बनाउने अध्ययन । अहिलेसम्म ४ करोड ४० लाख मानिसले उक्त एप डाउनलोड गरिसकेका छन् । उक्त एपलाई बेइजिङको किमाई टेक्नोलोजीले बनाएको हो ।
भारतले पठाएको यान चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश गर्‍यो, वैज्ञानिक उत्साहित
अश्लिल सामग्री (पोर्न) हेर्नुहुन्छ ? सावधान ! सार्वजनिक होला तपाईको नाम
के तपाईलाई थाहा छ फेसबुक सजिलोसँग चलाउन मिल्ने यी शर्टकटहरु ?
यी पाँच व्यक्ति, जसलाई फेसबुकमा कहिल्यै साथी नबनाउनुस्
एन्ड्रोइड फोनमा यसरी गर्न सकिन्छ युट्यूब भिडियो डाउनलोड
मोबाइल ब्याट्रीको लाइफ बढाउन र विस्फोटबाट रोक्न यसो गर्नुस्
डाइनोसरको विशाल हाड भेट्टियो
फेसबुकलाई हालसम्मकै ठूलो जरिवाना
अर्थ / व्यापार, मुख्य समाचार, विज्ञान / प्रविधि
इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भयो
भारतले चन्द्रमा तर्फ अत्याधुनिक यान पठायो
अब स्मार्टफोनबाट नियन्त्रण हुन्छ मानिसको मष्तिष्क !
यस्ता छन् आज देखिने खण्डग्रास चन्द्र ग्रहणका विशेषताहरु
हुवावे कम्पनी नेपालमा आउने, चौधरी ग्रुपसँग १० अर्बको सम्झौता
ट्विटरको घोषणाः नियम उल्लंघन गर्ने नेताको ट्वीटको पहुँच न्यूनीकरण
नेपालीमै समाचार पढेर सुनाइदिने एप्स आयो